काखी गन्हाएर तनावमा हुुनुहुन्छ ? यी हुन् काखी गन्हाउने समस्याबाट बच्ने उपाय - काखी गन्हाएर तनावमा हुुनुहुन्छ ? यी हुन् काखी गन्हाउने समस्याबाट बच्ने उपाय -
अत्यधिक पसिना निस्कने (हाइपरहाइड्रोसिस)र पसिना गन्हाउने समस्याको कुनै छुट्टै औषधि छैन । त्यसैले यसलाई लक्षण र कारणका आधारमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खानाको कारणले पसिना धेरै आउने र गन्हाउने शंका लागेको छ भने आहारविज्ञ ९डाइटिसियन० र चिकित्सकको सल्लाहमा खाना परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसमा चिल्लो अत्यधिक हुने, मसलादार, धेरै गन्ध आउने लसुन प्याजजस्ता मसला हालिएका खानालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
काखी सफा राख्नेस् काखी सफा गर्दा पहिले रौं हटाउनुपर्छ। त्यसका लागि गुणस्तरीय वार्म वा हेयर रिमुभर छान्नुपर्छ ताकि रौं निकाल्दा समस्या नआओस्।
वाक्सिङ र रिमुभस् काखीका रौंलाई राम्रोसँग वाक्सिङ र रिमुभगर्न सकिन्छ। राम्रोसँग वाक्सिङ वा रिमुभ गरेपछि चिसो पानीले पुछ्नुपर्छ अनि आइसको टुक्रा कपासमा बेरेर केही मिनेट काखीमा दल्नुपर्छ, त्यसो गर्दा संवेदनशील छाला पनि रातो हुन पाउँदैन।
दिनहुँ नुहाउने, शारीरिक परिश्रम वा खेल्दा पसिना आउने हुनाले त्यस बेला अर्कै लुगा लगाउने यी सामान्य उपाय भए । अत्यधिक पसिना आइरहन्छ भने सुत्ने बेलामा पसिना प्रतिरोधी ९एन्टिपस्र्पिरेन्ट० दल्ने ।
बिहान नुहाएपछि लगाइएको एन्टिपस्र्पिरेन्टलाई काम गर्नै नपाई एकछिनपछि फेरि आउने पसिनाले बगाइदिन सक्छ र उपाय निरर्थक हुन सक्छ । गन्ध प्रतिरोधक ९डियोडोरेन्ट० ले पसिना आउनबाट रोक्न सक्दैन यसले गन्धलाई छोप्न मात्र सक्छ ।
काखीलाई सुक्खा राख्ने, त्यहाँका रौं खौरिरहने, काखीमा डियोडोरेन्ट लगाउने गर्नु राम्रो हुन्छ । नुहाइसकेपछि काखीमा नियमित रूपले फिटकिरी ९एलुम० दल्ने गर्दा गन्ध पूरै हराउँछ ।